अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला अवार्ड पाएकी मुस्कान भन्छिन्, ‘हिंसाविरुद्धको आवाज बन्नेछु’
मुस्कान खातुन बिहान उठेकी मात्र थिइन् । ६ बजे नै मोबाइलमा घण्टी बज्यो । फोन रहेछ रोजी म्यामको । मुस्कानको मुखबाट ‘हेलो’ पनि खस्न नपाउँदै म्यामको आवाज आयो ।
‘बाधाई छ ।’
'बाधाई.. !' मुस्कान केही बेर अक्मकिइन् ।
‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रदान गर्ने इन्टरनेसनल विमेन अफ करेज अवार्ड (अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला अवार्ड) तिमीले पाएकी छौ’, रोजी म्यामले भनिन् ।
रोजी म्यामको फोनले मुस्कानलाई सर्प्राइज दियो ।
सुरुमा त उनलाई विश्वास नै लागेन । ठूलो अवार्ड पाउँछु भन्ने मुस्कानले सोचेकी पनि थिइनन् । तर, आशा भने मुस्कानलाई रहेछ ।
फेरि उनलाई कृस दादाको फोन आयो । त्यसपछि भने आफूले अवार्ड पाएको उनलाई विश्वास लाग्यो । उषाको किरणसँगै मुस्कानको मुहारमा एकाएक मुस्कान छायो । बिहानैदेखि बधाई र शुभकामनाले उनको फोनमा घण्टी बजिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि मुस्कानकै चर्चा छ ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले ट्वीट गर्दै यसबारेमा जानकारी पनि दिएका छन् । अवार्ड पाउने खातुन नेपालकै पहिलो हुन् । उनी यो अवार्ड जित्ने सबैभन्दा कम उमेरकी पनि हुन् । एसिड आक्रमण अन्त्यका लागि खातुनले गरेको कामको कदर गर्दै उनलाई यो अवार्ड दिइएको हो ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले ट्वीट गर्दै यसबारेमा जानकारी दिएका हुन् ।
पहिले खुसी परिवारसँग साटेकी मुस्कान भन्छिन्, ‘नेपाली जनातको मायाले पुरस्कार पाएको हुँ । यो खुसी म सबैसँग बाँड्न चाहुन्छ । आज म धेरै खुसी छु ।’
खुसीसँगै उनलाई चिन्ता पनि छ, 'दिदीबहिनी कहिलेसम्म हिंसामा पर्ने ? कतै आफूजस्तै अरु पनि एसिडको सिकार हुनुपर्ने त होइन ?'
उनी कामना गर्छिन्, 'अब कोही पनि दिदीबहिनीमाथि हिंसा नहोस् ।'
यो अवार्डले उनलाई थप हौसला र साहस दिएको छ । महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको आवाज बन्ने प्रण मुस्कानले लिएकी छिन् । भन्छिन्, ‘दिदी बहिनीमाथि हुने अपराध हिंसा रोक्न आवाज बन्नेछु । न्यायका लागि बोल्नेछु ।’
२०६७ साल भदौ २० शुक्रबार । वीरगञ्जको त्रिभुवन हनुमान विद्यालयमा ९ कक्षामा अध्ययनरत थिइन् । बिहानी सत्रको पढाइ थियो । किताब कापी च्यापेर विद्यालय हिँडेकी थिइन् । विद्यालय नपुग्दै उनीमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो । वीरगन्ज- २, छपकैयाका सम्साद मिया र मजिद आलमले मुस्कानलाई एसिड प्रहार गरेका थिए । उनको जीवनको लय नै बदलिएको त्यो दिन अब मुस्कान सम्झन पनि चाहँदिनन् ।
कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार गरउँदै मुस्कान । तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ/ शिलापत्र
‘त्यो दिन दुःखको दिन थियो । अब बिर्सेर अगाडि बढ्न चाहन्छु । सम्झेर पनि के गर्नु ? जीवनमा केही न केही कुराले संघर्ष गर्न सिकाउँदो रहेछ । मलाई त्यो दिनले संघर्ष गर्न सिकायो’, उनी भन्छिन् ।
एसिड आक्रमणपछि उपचारका लागि लामो समय उनी कीर्तिपुर अस्पतालमा बसिन् । उनको पढाइ पनि रोकिएको थियो ।
पुरानो दिनलाई बिर्सर जीवनलाई लयमा फर्काउँदै छिन् मुस्कान । उनी काठमाडौंको कलंकीमा रहेको ब्राइट फ्युचर एकेडेमीमा ९ कक्षामा पढ्दै छिन् । उनको सपना डाक्टर बनेर देशको सेवा गर्ने छ ।
मुस्कुराउँदै मुस्कान भन्छिन्, ‘९ कक्षामा पढ्दै छु । जस्तोसकै परिस्थितिमा पनि हार खानु हुन्न । पढेर नै अगाडि बढ्ने हो ।’
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला अवार्ड मुस्कान खातुनलाई
फर्किंदैछ मुस्कानको ‘मुस्कान’
अपराधीलाई उन्मुक्ति दिइयो भने जनदबाब सिर्जना गर्नेछु : मुस्कान
प्रधानमन्त्रीलाई मुस्कानको पत्र : एसिड हान्नेलाई फाँसीको सजाय होस्
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २१, २०७७, ११:२५:००